ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ရှပ်အင်္ကျီ - အဖြူရောင်, အနက်ရောင်, ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်, စုတ်ပြဲ, Short-ကျီ, တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်, ဘောင်းဘီ, ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် Sneaker, ဖိနပ်, ဘွတ်ဖိနပ်, ဒေါက်ဖိနပ်
တစ်ဦးစတိုင်လေးကိုဖန်တီးရန်ရေပန်းအစားဆုံးပေါင်းစပ်တစ်ခုမှာဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူရှပ်အင်္ကျီအသိအမှတ်ပြုသည်။ မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. သင်သည်ကြော့သို့မဟုတ်ရဲရင့်ခြင်းနှင့်သာမန်ထက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မည်သည့်ဖက်ရှင်တစ်ဦးသင့်လျော် option ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ရှပ်အင်္ကျီ 2017 နှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ဂျင်းဘောင်းဘီ
ဒါဟာရာသီဒီဇိုင်နာဂျင်းနဲ့ရှပ်အင်္ကျီကဲ့သို့သောပေါင်းစပ် အသုံးပြု. အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်နှစ်သက်တော်မူ၏။ ဒီဂျင်း၏အောက်ဆုံး၏ခြုံငုံပုံရိပ်နှင့်အတူဿုံအတွက်ကိုက်ညီထိပ်အောက်ပါခြင်း simulation options များလျှောက်ထား:
ထိပ်ဣတ္နှင့်ရင်ခုန်စရာလေးကိုအောင်, ruffles သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ;
ဂန္လေးကိုဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူအဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီတစ်ပေါင်းစပ် အသုံးပြု. အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်ပင်ရုံးအတွက်တိုးမြှင့်များအတွက်, ခွင့်ပြုသဖြင့်,
ယခုရာသီနှင့်ဂျင်း၏ဖန်ဆင်းထိပ်နဲ့အောက်ဆုံးတစ်လိုက်စားပေါင်းစပ်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဗီရိုပစ္စည်းများကို၏ရွေးချယ်ရေးရန်အလွန်ဂရုတစိုက်ချဉ်းကပ်ရပါမည်;
layering နှင့် asymmetry မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
image ကိုလိုက်ဖက်စွာကြည့်ရှုအကြောင်း, ဒါကြောင့်ဗီရိုပစ္စည်းများများ၏မှန်ကန်သောရွေးချယ်ရေးအာရုံစိုက်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေးအကောင့်သို့အကောင့်ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာသို့ယူရန်အကြံပြုသောအမျိုးသမီးပုံ၏ပိုင်ထိုက်သောယူပြီးဖျော်ဖြေနေသည်:
ပါးလွှာ silhouette တပ်ဆင်ရှပ်အင်္ကျီ, တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ် untucked ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်;
စားဆင်ယင်၏နှစ်ဖက်ပေါ်အလျားလိုက်အပေါက်နှင့်အတူစတိုင်ထုတ်ကုန်သည်သူ၏ဘောင်းဘီ၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုဒါ။ အလားတူဗားရှင်းကောင်းသောကြည့်ရှုနှင့်တစ်ဦး rounded အနားနှင့်အတူမော်ဒယ်လိမ့်မည်
သင်စားဆင်ယင်၏အပေါ်ဆုံးနဲ့အောက်ဆုံးကို select တဲ့အခါချိန်ခွင်လျှာဖြစ်သင့်: အသံအတိုးအကျယ်တစ်ဦးတည်းသာဤပစ္စည်းများကိုဖြစ်သင့်သည်။ လျောက်ပတ်ရှပ်အင်္ကျီအဖြည့် ဘောင်းဘီအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟု လျက်, အသံအတိုးအကျယ် - ကျဉ်း။
အဝတ်အစား၏ထိုကဲ့သို့သောအစု၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်အဆိုးဝါးဆုံးကိစ္စများထဲမှတစ်ခုမှာဂျင်းဘောင်းဘီမိန်းကလေးအတွက်ရှပ်အင်္ကျီဖြည့်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်သနည်း စတိုင်နှင့်ကြော့, စားဆင်ယင်ရှပ်အင်္ကျီကိုကြည့်ခြင်းနှင့် untucked ကထွက်ခွာသွားဖို့, ထိုကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရရမယ်:
အထက်အမြောက်အများလိုက်ဖက်စွာ leggings မြင့်မားသောစိုက်ပျိုးခြင်းဖြည့်စွတ်;
ဂျင်းဘောင်းဘီရှပ်အင်္ကျီအောက်မှာဝတ်ဆင်ပုံကိုတော်တော်များများရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံး, ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်ပေါ်တစ်ဦးပုံကိုပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းငယ်ရွယ်မင်းသမီး၏အင်္ဂါရပ်များမူတည်ပါသည်။ ဗီရိုပစ္စည်းများကို၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ဖို့ဘယ်လို, ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကူညီထိုကဲ့သို့သောအချိန်လေးများအတွက်အကောင့်:
အရောင်ရွေးချယ်မှု - stylist ကြောင်းမရှိတော့သေံပေါ်ထုတ်ကုန်သေံတက်ကောက်ဖို့ဖက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ အလားတူအရောင်အစီအစဉ်အတွက်ဖျော်ဖြေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအရိပ်ထဲမှာကွဲပြားသငျ့သညျ။ မယုံနိုင်လောက်အောင်စတိုင်အမှုအရာဥပမာကအနီနှင့်အဖြူအရောင်အဆင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနဲ့ဆနျ့ကငျြဘဖန်တီးကြည့်ပါ။
လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းတွေတစ်ခုမှာဂျင်းဘောင်းဘီဘောင်းဘီအောက်မှအမျိုးသမီးရှပ်အင်္ကျီခြေအိတ်ဝတ်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲမှာတော့ထိုကဲ့သို့သောရှပ်အင်္ကျီကိုအသုံးပြုရန်အထူးသဖြင့် apt ဖြစ်ပါသည်:
ပုံနှိပ်ဆဲလ်များနှင့်တစ်ဦးပုလ်ဖြတ်ရှိခြင်း။ ခြွင်းချက်တခုကိုအထက်ပိုင်းတရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်သောအခါ, "ကောင်းဘွိုင်" ပုံရိပ်၏,
အောက်ခြေမှာ rounded အနားအတူ။
ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူ Long ကရှပ်အင်္ကျီ
အဆင်ပြေပြေနဲ့ခေတ်မှီ ensembles တစ်ခု elongated အဖြတ်ရှိပါတယ်တဲ့ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူအမြိုးသမီးမြားရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီကို အသုံးပြု. အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလက္ခဏာအင်္ဂါရပ်များသည်ဤပေါင်းစပ်များအတွက်:
Chemise အောက်ခြေအပြားသို့မဟုတ်အချိုးမညီဖြစ်နိုင်သည်: တိုတောင်းနှင့်မဟုတ်တော့ရှေ့အောက်ခြေ;
အရှည်ကသူတို့ကိုရောက်ရှိဖို့ငှါ, ဒူးအထက်ဖြစ်, သို့မဟုတ်ပင်အလွန်အမင်းကြော့ type ကိုပေးဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူနိမ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှပ်အင်္ကျီဖြစ်နိုင်သည်;
မယုံနိုင်လောက်အောင် ensemble အနိုင်ရ - ဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်မိုးပြာရောင်ကနေဖန်ဆင်းတော်ဝတ်ထားဘောင်းဘီသို့တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်တဲ့ရှပ်အင်္ကျီ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အဝတ်အစားမဆိုသင့်လျော်သောအရိပ်, ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲ:
ဤသည်ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်လက်တွေ့ကျသောအရာဖြစ်ပါသည်, ကစင်နှင့်မူရင်းပုံစံရှိပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာသစ္စာရှိရှိအစေခံပါလိမ့်မယ်။ သူမ၏ကောင်းစွာပေါင်းစပ်နှင့်အတူ cardigans , pullovers နှင့်, အင်္ကျီသငျသညျအသေးဆဲလ်တစ်ဦးအေဘယ်တွိဂျာကင်အင်္ကျီကိုရွေးနိုင်သည်။ ထိုသို့သောပုံရိပ်တစ်ခုအတော်လေးတစ်ဦးကျဆုံးရာသို့မဟုတ်အစောပိုင်းနွေဦးရှိပါလိမ့်မယ်။ တစ်သဟဇာတလမ်းရဖို့တိုင်းအသေးစိတ်စဉ်းစားရန်: ထုတ်ကုန်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အရှည်, အင်္ကျီလက်, ကော်အမျိုးအစား, မော်ဒယ်ဘောင်းဘီ။
အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီအပေါ် untucked တစ် plaid ရှပ်အင်္ကျီပစ်မယ်ဆိုရင်င့်ဂီတပုံရိပ်ကို;
ပါတီမှ Going ကြောင့် preference ကိုထုတ်နှင့်အတူတောက်ပမော်ဒယ်များပေးရသည် သာ. ကောင်း၏;
ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှငျ့ ပတျသကျ. , ဖြူဘဝါးပေါ်တွင်သားရေခါးပတ်နဲ့ဖိနပ်ဿုံ image ကိုဖြည့်စွတ်။
အမျိုးသမီးပုံရိပ် - ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူရှပ်အင်္ကျီ
ပေါ့ပေါ့သို့မဟုတ်ရဲ့ style အတွက် ပေါ့ပေါ့ခရီးသွားမတ် chemise ကိုလည်းနေရာတစ်နေရာရှာပါ။ ၎င်း၏အဓိကအားသာချက် - ကကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး, လက်တွေ့ကျသော, လွယ်ကူပါတယ်;
ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် Sneaker ရှပ်အင်္ကျီ
တစ်ရှပ်အင်္ကျီ, ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် Sneaker - ဖက်ရှင်၏ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာပေါ်တင်ဆက်အအောင်မြင်ဆုံးပေါင်းစပ်တစ်ခုမှာ။ တစ်ဦးအံ့မခန်းလေးကိုဖန်တီးသောအခါ, ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာနိုင်သည်
ရှပ်အင်္ကျီတရားစွဲဆိုသို့မဟုတ် rounded အနားနဲ့မော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ဘောင်းဘီရှည်ကိုဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်;
စံ option ကိုအထီးပုံနဲ့တူတဲ့ရိုးရှင်းစုံစုံဖြတ်, သို့မဟုတ်, elongated အဖြစ်နိုင်သမျှနှင့်အချိုးမညီဖြတ်တောက်မှု၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မိမိအဒေါက်၏ပုံသဏ်ဌာမှထည့်သွင်းခြင်း, ဤပုံစံအတွက်ပါတီ, ရက်စွဲတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရုံးထဲမှာမှာပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သောဂျပေါင်းစပ်ပြီး၏ဖြစ်နိုင်သောနေသောခေါင်းစဉ်:
သင်တစ်ဦးဆက်စပ်ပစ္စည်းတောက်ပ clutch ကိုရှေးခယျြအထူးသဖြင့်ရှိလျှင်, တစ်ဦးစတိုင်ညနပေိုငျးလေးကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အထက်ပိုင်း, အဖြူရောင်သို့မဟုတ် pinstripe နှင့်ဖြောင့်ဘောင်းဘီကိုရှေးခယျြအပြာရောင်သင့်သည်,
ပိုပြီးသင့်လျော်သောအခြားလေးကိုအဘို့ - ဂျပိန်, ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်, ရိုးရှင်းပြီးအစိုင်အခဲအရောင်ထိပ်တန်း;
သင်ပူရက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအရာတစ်ထုံး, ကြိုးနဲ့တုတ်နိုင်သည့်အပြာရောင်ဘောင်းဘီ၏ multi-layer ကိုလေး, ဂျီဩမေတြီပုံစံများနှင့်အတူအဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့် unbuttoned ရှပ်အင်္ကျီ, ချင်လျှင်သင်စေနိုင်သည်;
ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စမ်းသပ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးလှေနှင့်ဂျင်း၏ဖန်ဆင်းတင်းကျပ်စွာဘောင်းဘီတစ်မိုနိုခရုမ်သို့မဟုတ်စင်းရှပ်အင်္ကျီစုံလင်သောတင်းကျပ်ပေါ်တွင်တင်လျှင်။ ထိုသို့သောပုံရိပ်တစ်ခုတစ်ချိန်တည်းမှာရဲရင့်ခြင်းနှင့် sexy နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းဦးရာသီပင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့အဆင်သင့်မတ်မတ်အောင်မြင်စွာဘွတ်ဖိနပ်ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ ဤပရိသတ်လက်တွေ့ကျပြီးစတိုင်ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမူကွဲဗီရိုပစ္စည်းများမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်:
ဘွတ်ဖိနပ်သို့သူတို့ကိုငါ tuck မှတင်းကျပ်စွာဘောင်းဘီကိုရွေးချယ်သင့်သည်,
ရှပ်အင်္ကျီအဖြစ်အနီရောင်ကလာပ်စည်းများတွင်ကြီးမားသောနှင့် monotonous နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကို double-ရင်သားကင်ဆာဂျာကင်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်အထက်တွင်;
ကောင်းဘွိုင်ဖိနပ် လည်းအထူးသဖြင့်ဘောင်းဘီရှည်နှင့်အနက်ရောင်ဖြောင့်ဘောင်းဘီ၏အထက်ပိုင်းတွင်, ensemble နှင့်အတူဿုံ go ပေမယ့်ဝတ်စုံကိုနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်။
အဝါနုရောင်ရှိသောမိုးကာအင်္ကျီဝတ်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အဆိုပါမီးဖို၌မုန့် - ရိုးရှင်းပြီးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
ဖြတ်ညှပ်ကပ်များအတွက် Tools များ
အနီရောင်မျက်လုံး - အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသရေး
ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော် 2017 ၏ဖွင့်လှစ်မှာအသည်းအသန်နမ်းမော်နီကာ Bellucci